२३ बालबालिकाका पिता बनेपछि अनुसन्धानमा तानिए युवक! | Rochak
April 19, 2021 NepstokLeaveaComment on २३ बालबालिकाका पिता बनेपछि अनुसन्धानमा तानिए युवक!
एजेन्सी । एक युवक एकै वर्षमा २३ बालबालिकाका जैविक पिता बनेपछि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। सुरुमा सौखले स्पर्म डोनेट (विर्य दान) गर्न सुरु गरेका उनले त्यसलाई पूर्ण पेसानै बनाए। ती युवकलाई गिरफ्तार गरि छानबिन सुरु भएको बताइएको छ। अष्ट्रेलियाको हो। एलन फाम नामक ती युवक स्पर्म डोनेट गरेर चर्चामा आएका हुन।
आफ्नो नस्लका कारण महिलाहरु आफूलाई मन पराउँने गरेको उनको दाबी छ। डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार एलेन आफै दुई बच्चाका बुबा हुन्। तर, उनले गोप्य रुपमा स्पर्म दान गरेर अरु महिलाबाट करिब २३ बच्चा पैदा गरेका छन्। उनले रेजिष्टर्ड फर्टिलिटी सेन्टरमा स्पर्म दान गर्छन।
अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बोनमा बस्दै आएका ४० वर्षीय एलनमाथि हाल अनुसन्धान भइरहेको छ। केही फर्टिलिटी क्लिनिकहरूले एलन विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। उनीमाथि वैध क्लिनिक बाहेक गोप्य रुपमा पनि वीर्य दान गरेको र निर्धारित सीमा भन्दा बढी बच्चा उत्पादन गरेको आरोप छ।
भिक्टोरियाको फेमिली कानूनमा एक व्यक्तिले केवल १० जनाको परिवार सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, एलनले भने वीर्य दान स्वीकार गर्नु आफ्ना लागि निकै कठिन हुने बताएका छन। उनले एकै दिनमा तीन जना सम्मलाई स्पर्म डोनेट गर्ने गरेका थिए।
श्रीमानको मृ’त्यु भएको १२ औ दिनमा रातो पहिरन